ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်လို့အလှဆုံး ကိုလိုနီခေတ် Bar လေးတစ်ခု
ကဲ..ဒီတစ်ခါ အလင်းပြမှာကတော့ ရူးရူးမူးမူးညို့စေခဲ့လို့ Akhayar ရဲ့ အမှတ်ပြည့်ရသွားတဲ့ Big Ben နာရီစင်ကြီးနဲ့ Bar လှလှလေးပါပဲ။
လှချက်က ခမ်းနားလွန်းလို့ စိတ်အာရုံအားလုံးကို ဆွဲညို့ပြီး မပြန်ချင်တောင်ဖြစ်မိစေတာ။
အမိုးထက်မှာပြန့်လွင့်နေတဲ့ ဖြူဖွေးဖွေးကြွေစာရွက်လေးတွေရယ်၊ ဟိုးအရင်ခေတ်ကအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ စာကြည့်တိုက်ကြီးရယ်၊ နာရီစင်အကြီးကြီးကို ဆိုင်ထဲထည့်ထားတဲ့ အထာအကျဆုံး ခေတ်ဟောင်း Restaurant and Bar တစ်ခု ရန်ကုန်မြို့မှာ ဖွင့်လိုက်တာသိပြီးကြပြီလား?
ကိုလိုနီခေတ်က အပြင်အဆင်တွေ၊ Retromanics ဆန်တဲ့ ခေတ်ဟောင်းနံရံပန်းချီတွေ၊ ဝါဖျော့ဖျော့မီးလုံးတန်းလေးတွေ၊ Wine တွေ၊ နှင်းဆီပန်းဖြူဖြူလေးတွေ၊ ချစ်စရာ ဝတ်စုံလေးတွေ ဝတ်ပြီးကြိုဆိုနေတဲ့ ဝန်ထမ်းချောချောလေးတွေကြားမှာ ရန်ကုန်မြို့ က Hotel ကြီးတစ်ခုဟာ ဒီလောက်တောင်လှနေတာကို အံ့သြမင်သက်ခဲ့ရတာတကယ်ပါ။
ဒီ Bar ဆိုင်လေးကိုတော့ Hotel ထဲမှာ တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီး ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ နိုင်ငံခြားက ကိုလိုနီခေတ်စားသောက်ဆိုင်တွေပုံစံကိုအခြေပြုပြီး တည်ဆောက်ထားတာပါ။
မျက်လုံးကိုရော စိတ်ကိုပါအဖမ်းစားဆုံးက ဟိုတယ် Reception ရှေ့ ဆိုင်ထဲအဝင် ဆိုဖာတွေပေါ်ကအလှဆင်ထားတဲ့ စာရွက်ဖြူဖြူအုပ်လိုက်ကြီးပါပဲ။ ဖြူဆွတ်လွင့်မျောနေတာပါ။ လှတာမှ ရူးရူးမူးမူးလှတာပါ။
ဒုတိယကတော့ ဆိုင်ရဲ့ အသက်ဖြစ်တဲ့ ဆိုင်အလယ်တည့်တည့်က နာရီစင်ကြီးပါပဲ။ Decoration အရမ်းလှလွန်းလို့ ချီးကျူးမိလောက်အောင်ကို ကြွေမိတာပါ။
တတိယအလှဆုံးက ဆိုင်ရဲ့ထွက်ပေါက်အရှေ့တည့်တည့်က Barခုံတန်းလေးပါပဲ။ ဝါဖျော့ဖျော့မီးလုံးလေးတွေနဲ့ ရိုလွန်းပါတယ်။
နောက်ထပ်အလှဆုံးကတော့ ဆိုင်အတွင်းဘက်ထောင့်နံရံက Retromanics ဆန်ဆန် နိုင်ငံခြားပုံတူပန်းချီပိုစတာအကြီးကြီးပါ။ အုတ်နံရံညိုညိုပေါ်မှာ ပနံရနေပါရော။
Bar & Restaurant ဆိုပေမယ့် အဓိကရတာကတော့ Wineတွေ၊ Cocktails တွေ၊ Coffee တွေနဲ့ Drinks တွေချည်း သီးသန့်သောက်လို့ရတဲ့ဆိုင်ဖြစ်ပြီး Appetizer နဲ့ တခြား Breads ၊ Sandwich၊ Pastas နဲ့ Home made Pastries တို့လို European Food တွေ ရပါတယ်။
Cappucino ပူပူလေးတစ်ခွက်သောက်ပြီးပြတင်းပေါက်နံရံလေးကိုငေးရင်း ထိုင်ဖီးလ်လို့ကောင်းလောက်အောင်ကို လှပါတယ်။ Cappucino ကတော့ အရသာပျော့ပါတယ်။
သောက်ခဲ့တဲ့ Orange Lemon Smoothie လေးကလည်း တကယ့် ဆန်းကစ်နဲ့ သံပုရာရောထားတဲ့ Smoothie စစ်စစ်အရသာမျိုး ချဉ်မွှေးမွှေးလေးနဲ့ အကြိုက်တွေ့မိပါတယ်။
အနည်းဆုံး ၃,၄ ဒေါ်လာကစပါတယ်။ ပုံမှန်အစားအစာတွေ၊ Drinks တွေကတော့ ၁၁ ဒေါ်လာ၊ ၁၂ ဒေါ်လာလောက်ရှိပါတယ်။ တကယ့်ကိုအဆင့်အတန်းမြင့် High Class တွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဆိုင်နေရာအနေအထားနဲ့ အပြင်အဆင်တွေကတော့ တကယ့်ကို အဆင့်အတန်းမြင့်လူနေမှုအတွက် ပိုအသင့်တော်ဆုံးပါ။
ဒါကတော့ တော်တော်သဘောကျခဲ့ရပါတယ်။ The News Room Restaurant ကိုလာတဲ့ ဧည့်သည်တိုင်း Hotel ထဲက စာကြည့်တိုက်ကြီးမှာပါ အေးဆေးစာဖတ်လို့ရသေးတယ်ဆိုတော့ သာယာလွန်းပါတယ်။
ခမ်းနားလွန်းလို့ ရန်ကုန်ရဲ့ တကယ့်အဆင့်အတန်းအမြင့်ဆုံး လူနေမှုတစ်ခုကိုဖော်ကျူးနေတဲ့ ဒီကော်ဖီဆိုင်လေးက ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း အောက်ဘလောက် အမှတ် ၁၉-၄၃၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်ထဲက Yangon Excelsior Hotel ထဲက The News Room Restaurant and Bar ပါ။ မနက် ၆နာရီခွဲကနေ ည ၁၁ နာရီခွဲထိ ဖွင့်ပါတယ်။
လှလွန်း၊ခမ်းနားလွန်းလို့ မရောက်မဖြစ်သွားပြီး အဆင့်အတန်းမြင့် Lifestyle တစ်ခုကို ဒီ The News Room Restaurant and Bar မှာ ခံစားကြည့်ပါဦးလို့ ရန်ကုန်ရဲ့ နောက်ထပ်အလှဆုံးနေရာလေးကို Akhayar ကနေ ညွှန်လိုက်ပြီနော်။
ရနျကုနျမွို့ရဲ့ ဓါတျပုံရိုကျလို့အလှဆုံး ကိုလိုနီခတျေ Bar လေးတဈခု
ကဲ..ဒီတဈခါ အလငျးပွမှာကတော့ ရူးရူးမူးမူးညို့စခေဲ့လို့ Akhayar ရဲ့ အမှတျပွညျ့ရသှားတဲ့ Big Ben နာရီစငျကွီးနဲ့ Bar လှလှလေးပါပဲ။
လှခကျြက ခမျးနားလှနျးလို့ စိတျအာရုံအားလုံးကို ဆှဲညို့ပွီး မပွနျခငျြတောငျဖွဈမိစတော။
အမိုးထကျမှာပွနျ့လှငျ့နတေဲ့ ဖွူဖှေးဖှေးကွှစောရှကျလေးတှရေယျ၊ ဟိုးအရငျခတျေကအသုံးအဆောငျပစ်စညျးတှနေဲ့ စာကွညျ့တိုကျကွီးရယျ၊ နာရီစငျအကွီးကွီးကို ဆိုငျထဲထညျ့ထားတဲ့ အထာအကဆြုံး ခတျေဟောငျး Restaurant and Bar တဈခု ရနျကုနျမွို့မှာ ဖှငျ့လိုကျတာသိပွီးကွပွီလား?
ကိုလိုနီခတျေက အပွငျအဆငျတှေ၊ Retromanics ဆနျတဲ့ ခတျေဟောငျးနံရံပနျးခြီတှေ၊ ဝါဖြော့ဖြော့မီးလုံးတနျးလေးတှေ၊ Wine တှေ၊ နှငျးဆီပနျးဖွူဖွူလေးတှေ၊ ခဈြစရာ ဝတျစုံလေးတှေ ဝတျပွီးကွိုဆိုနတေဲ့ ဝနျထမျးခြောခြောလေးတှကွေားမှာ ရနျကုနျမွို့ က Hotel ကွီးတဈခုဟာ ဒီလောကျတောငျလှနတောကို အံ့သွမငျသကျခဲ့ရတာတကယျပါ။
ဒီ Bar ဆိုငျလေးကိုတော့ Hotel ထဲမှာ တညျဆောကျထားတာဖွဈပွီး ရိုးရိုးရှငျးရှငျးလေးနဲ့ နိုငျငံခွားက ကိုလိုနီခတျေစားသောကျဆိုငျတှပေုံစံကိုအခွပွေုပွီး တညျဆောကျထားတာပါ။
မကျြလုံးကိုရော စိတျကိုပါအဖမျးစားဆုံးက ဟိုတယျ Reception ရှေ့ ဆိုငျထဲအဝငျ ဆိုဖာတှပေျေါကအလှဆငျထားတဲ့ စာရှကျဖွူဖွူအုပျလိုကျကွီးပါပဲ။ ဖွူဆှတျလှငျ့မြောနတောပါ။ လှတာမှ ရူးရူးမူးမူးလှတာပါ။
ဒုတိယကတော့ ဆိုငျရဲ့ အသကျဖွဈတဲ့ ဆိုငျအလယျတညျ့တညျ့က နာရီစငျကွီးပါပဲ။ Decoration အရမျးလှလှနျးလို့ ခြီးကြူးမိလောကျအောငျကို ကွှမေိတာပါ။
တတိယအလှဆုံးက ဆိုငျရဲ့ထှကျပေါကျအရှတေ့ညျ့တညျ့က Barခုံတနျးလေးပါပဲ။ ဝါဖြော့ဖြော့မီးလုံးလေးတှနေဲ့ ရိုလှနျးပါတယျ။
နောကျထပျအလှဆုံးကတော့ ဆိုငျအတှငျးဘကျထောငျ့နံရံက Retromanics ဆနျဆနျ နိုငျငံခွားပုံတူပနျးခြီပိုစတာအကွီးကွီးပါ။ အုတျနံရံညိုညိုပျေါမှာ ပနံရနပေါရော။
Bar & Restaurant ဆိုပမေယျ့ အဓိကရတာကတော့ Wineတှေ၊ Cocktails တှေ၊ Coffee တှနေဲ့ Drinks တှခေညျြး သီးသနျ့သောကျလို့ရတဲ့ဆိုငျဖွဈပွီး Appetizer နဲ့ တခွား Breads ၊ Sandwich၊ Pastas နဲ့ Home made Pastries တို့လို European Food တှေ ရပါတယျ။
Cappucino ပူပူလေးတဈခှကျသောကျပွီးပွတငျးပေါကျနံရံလေးကိုငေးရငျး ထိုငျဖီးလျလို့ကောငျးလောကျအောငျကို လှပါတယျ။ Cappucino ကတော့ အရသာပြော့ပါတယျ။
သောကျခဲ့တဲ့ Orange Lemon Smoothie လေးကလညျး တကယျ့ ဆနျးကဈနဲ့ သံပုရာရောထားတဲ့ Smoothie စဈစဈအရသာမြိုး ခဉျြမှေးမှေးလေးနဲ့ အကွိုကျတှမေိ့ပါတယျ။
အနညျးဆုံး ၃,၄ ဒျေါလာကစပါတယျ။ ပုံမှနျအစားအစာတှေ၊ Drinks တှကေတော့ ၁၁ ဒျေါလာ၊ ၁၂ ဒျေါလာလောကျရှိပါတယျ။ တကယျ့ကိုအဆငျ့အတနျးမွငျ့ High Class တှအေတှကျ သငျ့တျောပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီဆိုငျနရောအနအေထားနဲ့ အပွငျအဆငျတှကေတော့ တကယျ့ကို အဆငျ့အတနျးမွငျ့လူနမှေုအတှကျ ပိုအသငျ့တျောဆုံးပါ။
ဒါကတော့ တျောတျောသဘောကခြဲ့ရပါတယျ။ The News Room Restaurant ကိုလာတဲ့ ဧညျ့သညျတိုငျး Hotel ထဲက စာကွညျ့တိုကျကွီးမှာပါ အေးဆေးစာဖတျလို့ရသေးတယျဆိုတော့ သာယာလှနျးပါတယျ။
ခမျးနားလှနျးလို့ ရနျကုနျရဲ့ တကယျ့အဆငျ့အတနျးအမွငျ့ဆုံး လူနမှေုတဈခုကိုဖျောကြူးနတေဲ့ ဒီကျောဖီဆိုငျလေးက ဗိုလျဆှနျပကျလမျး အောကျဘလောကျ အမှတျ ၁၉-၄၃၊ ပနျးဘဲတနျးမွို့နယျထဲက Yangon Excelsior Hotel ထဲက The News Room Restaurant and Bar ပါ။ မနကျ ၆နာရီခှဲကနေ ည ၁၁ နာရီခှဲထိ ဖှငျ့ပါတယျ။
လှလှနျး၊ခမျးနားလှနျးလို့ မရောကျမဖွဈသှားပွီး အဆငျ့အတနျးမွငျ့ Lifestyle တဈခုကို ဒီ The News Room Restaurant and Bar မှာ ခံစားကွညျ့ပါဦးလို့ ရနျကုနျရဲ့ နောကျထပျအလှဆုံးနရောလေးကို Akhayar ကနေ ညှနျလိုကျပွီနျော။